နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကိုရှာဖွေခြင်း - Page 15 of 18 - Hello Sayarwon
Dr. Kaung Thar မှ ရေးသားသည်။ 16/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှာဖွေရန် ဆရာဝန်မှဆေးဝါးရာဇဝင်များမေးခြင်း၊ ရောဂါစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်သွေးစစ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရပါသည်။ ဆရာဝန်တို့မှ ရောဂါရှာဖွေသည့် စမ်းသပ်မှုများကို တစ်ခုထက်ပို၍ ထောက်ခံပေးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အီးစီဂျီ သည် နှလုံး လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အချက်ပြသည့်မှတ်တမ်းများဖြစ်သည်. ဤစမ်းသပ်မှုသည် ယခင်က နှလုံးရောဂါ(သို့) ရောဂါပိုဆိုးလာကြောင်းကို ပြနိုင်ပါသည်။ အခြားနေရာများတွင် Holterနည်း (၂၄ နာရီ အီးစီဂျီ )ဖြင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းသည် လူနာမှ ရွေ့လျားမော်နီတာကို ၂၄နာရီကြာ တပ်ဆင်ထားပြီး နေ့စဉ်ပုံမှန် အလုပ်များလုပ်နိုင်သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုက နှလုံးသို့သွေးစီးဆင်းမှု မလုံလောက်ခြင်း ကဲ့သို့သော ပုံမမှန်မှုများကို ညွှန်ပြပေးနိုင်ပါသည်။
နှလုံးပုံရိပ်များကိုထုတ်ရန် နှလုံးပညာရှင်များသည် အသံလိှုင်းဖြင့် အသုံးပြုသည့် နှလုံးအက်ကိုးရိုက်ခြင်း(Echocardiogram)ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း သင့်ဆရာဝန်မှ နှလုံးနံရံ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် ပုံမှန်ခုန်ခြင်းရှိမရှိကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။ နှလုံးရပ်စဉ် ထိခိုက်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ(သို့) အောက်ဆီဂျင်နည်းနည်းရရှိခြင်းများက သွေးစီးဆင်းမှုနည်းသည့် ပုံရိပ်မျိုးတွေ့ရပါသည်။ echocardiogram မှအဖြေသည် နှလုံသွေးကြောရောဂါနှင့် အခြားအခြေအနေများကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း အီးစီဂျီ ဆွဲခြင်း(stress test)
လေ့ကျင်ခန်းလုပ်သည့် stress testသည် စက်ပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်း(သို့) စက်ဘီးစီးခြင်း ပြုလုပ်နေစဉ် အီးစီဂျီဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းကို သင့်ရောဂါလက္ခဏာများသည် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်(သို့) နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်စဉ် မကြာခဏ ဖြစ်ပါက အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချို့နေရာများတွင်လေ့ကျင့်ခန်းအစား နှလုံးကို လှုံဆော်ပေးသောဆေးဝါးများ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ပြင် အချို့ stress test များကို echocardiogram သုံးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ ဆရာဝန်မ ှသင်စက်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း(သို့) စက်ဘီးစီးခြင်းမလုပ်ခင်နှင့် လုပ်ပြီးချိန်တွင် echocardiogram ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် နှလုံးကို လှုံဆော်သည့် ဆေးဝါးများ သုံးပြီးနောက် echocardiogram ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားအရေးကြီးသော stress test မှာ nuclear stress testဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ နားနေစဉ်နှင့် လှုပ်ရှားနေစဉ်တွင် နှလုံးကြွက်သားဆီသို့သွေးစီးဆင်းပုံကို တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် stress test နှင့်တူပါသည်။ သို့သော် အီးစီဂျီ အပြင် နှလုံးရုပ်ပုံများပါဝင်ပါသည်။ သင့်သွေးထဲသို့ tracer ဟုခေါ်သည့် အိုင်စိုတုတ်အတုကို ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် အထူးကင်မရာကို အသုံးပြု၍ ဆရာဝန်များမှ နှလုံး သွေးစီးဆင်းမှု နည်းသည့်နေရာများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
နှလုံးပိုက်ထည့်ခြင်း (Cardiac catheterization) (သို့) သွေးကြောပုံရိပ်ဖော်ခြင်း (Angiogram)
ဤစမ်းသပ်မှုကို သင့်နှလုံးသွေးကြောများသို့ အထူးဆိုးဆေးတစ်မျိုးကို ထည့်သွင်း၍ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Angiogram အဖြေများမှ တစ်ဆင့် သင့်နှလုံးတစ်လျှောက် သွေးစီးဆင်းမှုကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အထူးဆိုးဆေးသည် ကျဉ်းသောနေရာများနှင့် ဓါတ်မှန်ပုံရိပ်များမှ ပိတ်နေသောနေရာများကို ပုံဖော်ပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် ကုသမှုလိုအပ်သော ပိတ်နေသောနေရာရှိပါက ပိုက်ပျော့ မှ တစ်ဆင့် ပူဖောင်းကို ထည့်ကာ သင့်နှလုံးသွေးကြောတွင် သွေးစီးဆင်းမှု ပိုကောင်းအောင် ဖောင်း၍ချဲ့ပေးခြင်းပြု လုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ကွန်ရက်ကဲ့သို့ ပြွန်ချောင်းကို သွေးလွှတ်ကြောပွင့်အောင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
နှလုံး ကွန်ပျူတာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း(CT) နည်းပညာသည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါများရှာဖွေရန် ဆရာဝန်ကို ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းသည် သွေးလွှတ်ကြောများကို ကျဉ်းစေသည့် ကယ်လ်စီယမ်လာပုံခြင်းကို သိရှိစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤအဖြေမှ ကယ်စီယမ် ပမာဏတစ်ချို့တွေ့ရှိပါက နှလုံးသွေးကြောရောဂါပို၍ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် နှလုံးသွေးကြောပုံရိပ်ဖော် နည်းတွင် ဆရာဝန်မှ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် ရိုက်နေစဉ် အထူးဆိုးဆေးထိုးပေး ခြင်းအားဖြင့် နှလုံ့းသွေးကြော၏ ပုံရိပ်များကို တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
Coronary heart disease – Diagnosis. http://www.nhs.uk/Conditions/Coronary-heart-disease/Pages/Diagnosis.aspx. Assessed January 19, 2017.
Coronary artery disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronary- artery-disease/diagnosis-treatment/diagnosis/dxc- 20165331. Assessed January 19, 2017.